July 3, 2020 NEWS 22
BOOSAASO(P-TIMES) – Senator katirsan baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya, Wasiiro hore oo katirsanaa Xukuumaddihii iskaga dambeeyey ee Puntland, Jeneraalo ciidan oo kamid ah Asaasayaashii Puntland, Aqoonyahano & Ganacsato ayaa soo saaray bayaan rasmi ah oo ku wajahan xaaladda Puntland iyo waqtiga kala guurka ah.
Warsaxaafadeedka, waxaa lagu cadeeyey in aysan marnaba ka go’aynin Soomaaliya, waxaana diiradda lagu saaray arrimaha siyaasadda ee hadda taagan, iyadoo caqabadaha hadda waa weyn ay yihiin kuwa muhiim ay tahay in looga gudbo.
Waxaa bayaankan ka muuqda rag u badan danleey kala harán wayday xaq iyo baadil. Kama aysan hadal in dastuurkii lagu tuntay oo federaalkii la diiday. Waxay fikirkooda ku saleeyeen Saddex arrimood:
1. Lagacta Qatar oo sandareerto ka soo gaartay..
2.. Ballanqaad siyaasadeed.
2. Qabyaalad cad oo ay Farmaajo ku taageereen ayna kaga soo hor jeedaan Maxamuud Saleebaan.
Essa Mohamud says:
Waa Bayaan ay soo saareen kuwa u shaqeeya danahooda gaarka ah kana hor imaanaaya go’aamadii masiiriga ahaa ee ay soo saareen Barlamaamka Puntland iyo Madaxweynaha Puntland,waa bayaan aan habayaraatee lagu xusin xadgudbkii iyo sharcidarooyinkii lagu sameeyey Dastuurka JFS. waxaa ka muuqata u janjeerid (partiality) dhinaca N&N.
Dasttura lagu tuntay mey ka hadlaan, cAASIMADII OO LA SHEEGTAY MEY KA HADLAAN, Iskudeynta,awood maroorsiga farmaajio mey ka hadlaan,. kuwaasi waa dad dabada laga riixayo ee dana khaasa leh. farmaajio hala taliyaan. Mudulood wax ha i sheegaan in wax baan soo dhacsanay aaney soconeyn.
Maxamad Yusuf says:
Waxaan arkaa kooxo ay kulmisay :-
4-Si xun wax u sheeg iyo
5- Wadaad xumayaal.
Waxaa kale oo ka muuqda odayaal muddo hore ka haajiray oo lagu been abuurtay.
Waxaa haboon in laga gudbo feera orodka dawladda lana adeeco talooyinkeeda wacan.
Waa xeelad kale oo ‘Nabad & Nolol ‘ isku dayeyso inay ku kala qaybiso reer Puntland. Waa shaki la’aan in shakhsiyaad laga soo diray Villa Somalia ay raadsadeen dadkan oo bayaankan abaabuleen.
Dadkan badankooda anigu weligayba ma maqal. Waxaan ka gartay dhowr oday oo ahaa saraakiil militari iyo kuwo rayid berigii Siyaad Barre, waagaasna ma ahayn dad magac ku dhex leh bulshada ee carruurtooda bay u xammaalan jireen. Waxaa kaloo muuqata in la rabo in reer Puntland loo qaybiyo beelo hoosaadyo laakiin, nasiibwaanaag, kuwani maha kuwo cidna saamayn kara.
Waxaa habboon in dadku soo saaraan bayaan markii ay awood u leeyihiin in labada daraf ee is-haya maqlayaan oo ixtiraamayaan baaqooda. Maxay saamayn ah oo ku yeelan karaan Farmaajo iyo inta la qorshaha ah?
Dastuur in la ixtiraamo bay ka hadlayaan; sow meesha sartu ka quruntay ma aha, maxaa kale oo la isku haystaaba? Ma ka dhaadhicin karaan Farmaajo inuu dastuurka ku dhaqmo oo ixtiraamo?
U fiirso, intooda badan waa wasiirro iyo xildhibaanno hore oo Puntland oo waayey in dib loo soo doorto, in badan oo ka mid ahna Xamar bay ugu nool yihiin bakhtidhowr ahaan. Qaar waxay sheegteen ganacsato. Yaa warkooda dhegaysanaya dabokanaaxyada ka taajirey cunto dhacday iyo dawo ‘fake’ ah soddonkii sano ee ina dhaafay!
Puntland waxay leedahay dad si walba uga horreeya isla markaana fahamsan waxa ay kuwani ka hadlayaan iyo wax kasii qotodheerba, iyaga ayaana go’aan ka gaari doona masiirka Puntland.
Ugu dambeyn, reer Puntland ha iska dayeen hadallada ay ka mid yihiin ‘hooyada federalka’ iyo waxa la midka ah. Kursiga Madaxweyne C/llahi Yuusuf geeyey Villa Somalia waxaa loo arkaa oo loola dagaallamay xukun iyo ‘gumeysi Daarood’ oo soo noqday, ee looma arag dowladnimo Soomaaliyeed oo soo noqotay. Puntland waxaa maanta horyaal fursaddii ugu dambeysay oo ah inay dadkeeda mideeyso, xudduudaheeda difaacato, iskeedna u istaagto ilaa inta laga helayo Soomaali diyaar u ah aqbalidda iyo ku-dhaqanka wixii lagu heshiiyey ama lagu heshiin doono.
Wasiir hore Somaliland Cali Buureed waa ninkii Mr. Siilaanyo soo xambaaray ee keenay Laasqoray kuna doodayey in Sanaag iyo Haylaan ka mid yihiin Somaliland sidee maanta uga hadlaa arrimaha puntland miyuu waalan yahay mise cadan baa laga heesayaa
Jamal irbad says:
Waxa laagaraba Aqonayahanaka Puntland inaya Keenan waxa dadaka Puntland qanaciya.
Dawalad somalia Waxa Lagu Dhisaya Wadatashi iyo Walalowa iyo isfagarad.
IYO Heeshis bulasho yaa Dumiyaya.
DHAMAAN KUWA BAYAANKA KU QORAN WAA KUWO FAASHIL WADA AH. ADEERAYAAL IYO AWOOWAYAAL WAXAAN IDIN LEEHAY “DARIIQA DENI NAGU WADO SOO RAACA”.
Waxbaa xaqiiq ah in datuurka dawlad go aleedyudu ku tunteen awoodii dawlada dhexe lahayd a ku qabsaden baarlamaanka federalku yiraahdeen nama metelo dekedihii diiden in lamideeyo lajiifiyaana banaan
Ha laynabaro federalka
Who the hell are they? Ass-lickers. War koodu dhadhan maleh.
Hal qodob oo dastuur ah oo lagu tuntay yaa keeni kara. Dastuur baa lagu tuntay qofkalaa laga soo maqlay markaasbaa larabaa in wax lagu raadiyo. Dameeri dhaan raacday hadii loo maleeyo dadka reer Puntland maha. Xukuumada waalan ee Deni dib ha isugu noqoto.
War kalena waa sugaynaa.
Haddii alle idmo, waxa aan sugnaaba waa (Jul 5-8) oo loo muddeeyey is aragga lugta labaad ee ciyaaraha lagu qabanayo Muqdisha; FALLAADHI GILGILASHO KAAGAMA HADHO. Waxa kale oo la yiri, “dhuumasho dhabarku muuqdo dhuumasho ma aha”.
Midda kale, caqabaddii xuladfada Imaaraadku u dhigeen xulufada Qatar, ee ahayd dhismaha GUDDIGII AQALKA SARE, ee ay doonayeen in ay kula wareegaan awoodda dawladda iyo baarlamaanka waa la baloogay; goolkaasu ma dhalan. Deedna kooxdii xulufada Qatar waxa ay soo qaadeen weerar CULUS kaddib balooggii ay saareen guddigii Faroole & Juriile, ee loo soo dhexmaray Cabdi Xaashi.
Baarlamaankii bay dhabarka ka soo taabteen, oo waxa la meelm mariyay shuruuc dhawr ah oo boobsiis ah. Intaa kumay fadhiyine waxa ay u dhex raaciyeen warbixintii guddiga madaxa bannaan. Waxa ay aqoonsi cawri gaf ah siiyeen Madoobe, si ayay isaga sii jheediyaan indhaha beesha LIXAAD oo miiska fadhida.
Ugu danbayntiina waxa ay fidiyeen GOGOL WADATASHI (GOOOOOOOOOOOOOOOL).
Ciyaartu halkaas bay maraysaa. Haddaad tagtid kuu daran, haddaad ka baaqsatidna kuu daran; waa laba daran mid dooro. Labada dhinacba waxa ay guul u tahay kooxda xulufada Qatar maal galiso ee villada. Kubbadu waxa ay taallaa dhinaca Imaaraadka, in ay ka soo jawaabbaan HAL XIRAALAHA la hordhigay. War kalana waa sugaynaa, haddii alle idmo.
Inaka daaya, Hooyan nahay, madax baan nanay iyo waxla mida. Somaliyi isma rabta, Burburkaaga ayaa la jecel yahay. Garaaca qofkaad ka maqashaan Hooyaan nahay iyo Futaan nahay.
Wax Deni u caqli celiya intuusan Puntland burburin waa loo baahan yahay.
mala hubaa boowe
webka ugu beenta badan yaa yaqaan?????????????????
ninka sharciga wadanka ku tuntey waa layaqaan
pl bur buri meyso ninka burburka laraba oo baa biinaya waa farmaajo
iyo qaar cuqdad qaba
Ilaa hada qodob la jabiyey wax ii sheega ma hayo. Hadal bilaash ah looma baahna. Hadal badan haan ma buuxsho.
waxaan daee mayaa nimanka halkaan aaqa ka jeedinaya aa labo mid 1 mucaaradka Puntland
2 u adeegayaasha xooxda naf lacaarigaa ee Nabad uyo Nolol. adeer Puntland waxay leedahey hogaan loo gadan beynayo muddo xilood kooda marka, kumash uula ganac sigiina is kadaayoo axeydaan ogeyn.
waxaan daree mayaa nimanka halkaan ka jeedinaya hadalka waa labo mid 1 mucaaradka Puntland
2 u adeega yaasha xooxda naf lacaarigaa ee Nabad uyo Nolol. adeer Puntland waxay leedahey hogaan loogadan beynayo muddo xilood kooda marka, kumash quula ganacsigiina is ka daayoo wax eydan ogeyn.
yaa lagu dagdegin farmaajo isagaa mucaarad iskugu filan